Dictionnaire malgache et encyclopédie de Madagascar : /bins/ohabolana/mitondra.mg.av
Proverbe Aleo malaza ho sarotra, toy izay hitondra alahelo mody. [Veyrières 1913 #5643, Cousins 1885 #91]
Andro hamaizan-trano mitondra afo am--bilany kely; fa nony afaka eo, manao fanilo main’ andro. [Veyrières 1913 #5324, Cousins 1885 #217]
Proverbe Aza atao lamban’ ny matory: izay mahatsiaro manintona. [Cousins 1885 #357]
Proverbe Aza mitondra entan-tsy voafehy. [Cousins 1885 #669]
Proverbe Aza mitondra hodi-nato miantsinanana. [Houlder 1895 #1678, Cousins 1885 #670]
Proverbe Boka mifandromba-kena : misarika ihany fa tsy mitondra. [Veyrières 1913 #1964, Rinara 1974 #916, Cousins 1885]
Proverbe Fo tsy voalefitra, mitondra nenina, fanahy tsy voatsindry, mitondra loza. [Veyrières 1913 #6413, Rinara 1974 #1211, Cousins 1885 #980]
Halo-pozan' ny mondry : mingadona ihany, fa tsy mitondra. [Veyrières 1913 #1998, Cousins 1885]
Proverbe Kibon’ omby ririnina, ka mitondra tapany lava. [Veyrières 1913 #3921, Cousins 1885 #1269]
Proverbe Mamba miandry fitàna : izay mirotsaka ao aminy, na tsy maty aza, tsy maintsy harahim-pahoriana. [Cousins 1885, Veyrières 1913]
Proverbe Mitondra adidy amy ny tsy atao, ohatra ny fangala-bola. [Cousins 1885]
Proverbe Mitondra izay fitondran-tena tsy ampy ka vovozin' ny amboa tompon-tany. [Veyrières 1913 #3042, Rinara 1974 #2475, Cousins 1885]
Mitondra roa, ohatra ny vehivavy somorona : ny hetran-dray tsy apetraka, ny lova tamin-dreny tsy avela. [Cousins 1885]
Proverbe Nahoana no haka rindra ka hitondra kofehy ? [Veyrières 1913 #2095, Cousins 1885 #2042]
Proverbe Ny vitsika no keliray, ny fanompoana no mafy : mivoaka, mitondra tany ; miditra, mitondra hanina ; kanefa nony tonga, ny tsy naka no homana. [Veyrières 1913 #731, Cousins 1885 #2481]
Proverbe Sakay sy voamperifery: samy mitondra ny ngidiny ho azy. [Veyrières 1913 #4589, Cousins 1885 #2839]
Sakamalao sy havozo : samy mitondra ny hanitra ho azy. [Veyrières 1913 #4587, Cousins 1885 #2833, Rajemisa 1985]
Tongo-bakivaky sady maharary no mahamenatra. [Veyrières 1913 #5311, Cousins 1885 #3135, Rajemisa 1985]
Tsakarano : ny aloha tsy mitsaha-tsy feno, ny aoriana tsy mitondra tapany. [Cousins 1885]
Tsakarano : ny tonga aloha ihany no aloha. [Cousins 1885]
Tsy mandre, sa tailana andrenesana, no mitondra teny tanora ? [Veyrières 1913 #4840, Cousins 1885]
Proverbe Tsintsina mitondra sompanga: ny taona dia zina, fa ny kibo hasiana no tsy misy. [Cousins 1885 #3320]
Tsintsina nahazo sompanga: nahazo lehibe, fa tsy omby ny kibo. [Veyrières 1913 #5880, Cousins 1885 #3321]
Tsintsina nitondra sompanga : tongan' ny aina, fa tsy omby vava. [Veyrières 1913 #5880, Cousins 1885]